မှားခဲ့ပါတယ်…မှားနေဆဲပါပဲ…နောက်ထပ်လဲ မှားနေဦးမှာပါပဲ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မှားခဲ့ပါတယ်…မှားနေဆဲပါပဲ…နောက်ထပ်လဲ မှားနေဦးမှာပါပဲ….
Posted by johnnydeer on Feb 16, 2013 in Short Story | 11 comments
အမှား… သာမန်အမှား…မတော်တဆအမှား…ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျုးလွန်တဲ့ အမှား…ရီစရာအမှား…ဘ၀ပျက်လောက်တဲ့ အမှား…ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အမှား…ခွင့်မလွှတ်သင့်တဲ့ အမှား…စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ အမှားကို သရုပ်ခွဲကြည့်ရရင်တော့ အမှား အမျိုးမျိုးရှိကြမှာပါပဲ…မမှားဘူးတဲ့သူ လောကမှာမရှိခဲ့သလို မှားတာတွေတိုင်းကိုသည်းမခံ ခွင့်မလွှတ်ပဲ ထာဝစဉ် အပြစ်ပေးအရေးယူနေလို့လဲ မဖြစ်ပါဘူး…ပြေပြေလည်လည် ရှင်းပြလို့ နားလည် လက်ခံတဲ့သူဆိုရင် သေသေချာချာ ရှင်းလင်း ပြောဆိုပေးရမယ်…အရေးယူအပြစ်ပေးရမယ့်သူဆိုရင်တော့ အရေးယူရပါမယ်…အမှားကျုးလွန်တဲ့ သူရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာရယ်…ကျုးလွန်မိတဲ့ မူရင်းအကြောင်းအရာကိုလဲ သေသေချာချာ စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် စဉ်းစားပြီး ခွင့်လွှတ်သင့်သလား…အရေးယူရမှာလား ခွဲခြားစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ ကျွန်တော်တော့ထင်တာပါပဲ….
လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး…အားလုံးသာ မှန်နေရင်တော့ ခဲတံနောက်မှာ ခဲဖျက်တောင် တပ်စရာ မလိုပါဘူး…အမှားဆိုတာ သိတတ်တဲ့သူ…အမှားဆိုတာကို လက်ခံတတ်ပြီး မှတ်မှတ်သားသားရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ တခါတလေမှာ သူ့အမှားက သူ့အတွက် ပိုတန်ဖိုးရှိနေတတ်ပါသေးတယ်…ဥပမာ…ကျွန်တော်ဆို ငယ်စဉ်တုန်းက အပတ်စဉ်စာမေးပွဲတွေ…လစဉ်စာမေးပွဲတွေ…ပထမအစမ်း…ဒုတိယအစမ်း စာမေးပွဲတိုင်းမှာ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို အမြဲတမ်း စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ မှတ်ထားတတ်ပါတယ်…အားနေတဲ့ အချိန်တိုင်း မှားခဲ့ဘူးတဲ့ အမှားတွေ ပြန်ကြည့်တယ်…တကယ့် ဖိုင်နယ်စာမေးပွဲတွေမှာ အရင်မှားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေ ပြန်တွေ့တိုင်း အမြဲတမ်း သတိတန်းရပါတယ်…ငါ…ဒီနေရာမှာ မှားခဲ့တယ်…နောက်ဘယ်တော့မှဒီနေရာမှာ ဒီလို ပြန်မမှားဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲ ပြန်သတိပေးတယ်…နောက်အမှားအသစ်တစ်ခုသာ ကျုးလွန်မိရင် ကျုးလွန်မယ်…အရင်အမှားတော့ ထပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး…တခါတလေ တော့လဲ မှားခဲ့ဘူးတဲ့ ကိုယ်အမှားဟာ ကိုယ့်အတွက် တကယ်တန်ဖိုးရှိနေတတ်ပါတယ်…
တကယ်လို့များပေါ့လေ…ပထမတစ်ခေါက် မှားတယ်…သတိပေးတယ်…မပြင်ဘူး…ဒီအမှားမျိုး နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မှားတယ်…ထပ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးတယ်..မရဘူး…နောက် ထပ်ခါထပ်ခါမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် အပြစ်ပေး အရေးယူရတော့မှာပါပဲ…အဓိက ဆိုလိုချင်တာကတော့ လူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်…မှားခွင့်လဲ ရှိပါတယ်…ပြင်ဆင်ခွင့်လဲပေးသင့်ပါတယ်…ခွင့်လွှတ်နိုင်တာလဲ ခွင့်လွှတ်လို့ရရင် ခွင့်လွှတ်ရပါမယ်…မှားတာတွေ့လို့ကတော့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ဘယ်လိုအမှားပဲဖြစ်ဖြစ် တွယ်လို့ရလို့ကတော့တွယ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်သဘောထားမျိုး ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလောကကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး…
နောက်ပြီး လူတစ်ယောက်ဟာ အမှားတစ်ခု ကျုးလွန်ပြီ…မှားခဲ့ပြီ ထားပါတော့…သူ့ကိုလဲ သေချာပေါက် အပြစ်ပေးအရေးယူရတော့မယ်ဆိုရင် သူဘာကြောင့် ဒီအမှားကို ကျုးလွန်ခဲ့တာလဲ…ဆိုတဲ့ အဓိက အချက်နဲ့ ကျုးလွန်သူရဲ့ ကျုးလွန်စဉ် ထားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလဲ အဓိကထားစဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တာပါပဲ…လူသတ်မှုနှစ်ခုထားပါတော့… တိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာတွေဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်အပေါင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကြိုတင်ကြံစည် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဂဠုန်ဦးစောလို လူကိုပေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထဲလာပြီး ကိုယ့်နှမကို စော်ကားမလို့ကြံတဲ့သူကို တွန်းလွှတ်ရင်းစော်ကားသူ မတော်တဆ လဲကျသွားလို့ ခေါင်းကိုထိ သေသွားလို့ ဖြစ်သွားတဲ့လူကိုပေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ခုကို သေစားသေစေ ဆိုပြီးအတူတူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တာ အမှန်ပါပဲ…ကျုးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုတူသော်ငြားလဲ ကျုးလွန်စဉ်က အဓိကအချက်နဲ့ကျုးလွန်သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အဓိကထား စဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
အရင်တစ်လလောက်ကပဲ ဟိုတယ်ည ရီဆက်ရှင် ကောင်လေးက မနက်ပိုင်း သူ့ဂျုတီချိန်အတွင်း CHECK OUT လုပ်တဲ့အခါ ရက်စွဲ အကြည့်မှားပြီး နှစ်ရက်တည်းတဲ့ ဧည့်သည်ကို တစ်ရက်စာပဲ အခန်းခယူလိုက်တယ်…ဒီငွေကိုသူ့ရဲ့ပေါ့လျော့မှုအတွက် လျော်ခိုင်းရမလား…တာဝန်ခံမှု…တာဝန်ယူမှုဆိုတာ ရှိပေမယ့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီငွေဟာ သူ့အတွက် တကယ့် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးပါပဲ…သူမှားတယ်…ဒါပေမယ့် မှားတဲ့ အဓိကအချက်နဲ့ သူ့နောက်ကြောင်း…စိတ်နေစိတ်ထား ဒါတွေကို စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ရတာပါပဲ…သူအရင်က မှားဘူးသလား…မမှားဖူးဘူး…အရင်ကကော ငွေရေးကြေးရေးပိုင်း…အကျင့်စာရိတ္တပိုင်း စိတ်ချရသလား…စိတ်ချရတယ်…ဒီလိုအချက်တွေ ကြည့်ပြီး နောက်မမှားဖို့ ချိုသာပျော့ပြောင်းစွာ ပြောပြပြီး ဒီဇာတ်လမ်းကို ဒီမှာတင်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်…ဒီဝန်ထမ်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အင်မတန်စိတ်ချရတဲ့… အလုပ်ကို မိသားစုအလုပ်လို သဘောထားနိုင်တဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်…အဲ့ဒီတုန်းကသာ သူ့အမှားအတွက် အလျော်ခိုင်းခဲ့မယ်…အပြစ်ပေး အရေးယူခဲ့မယ်ဆိုရင် အားထားရတဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးချင် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်…
နောက်ပြီး အရင်ကပို့စ်မှာရေးထားတဲ့ နေ့လည် ရီဆက်ရှင်မိန်းကလေး…သူ့ကိုလဲ ဒီလိုပဲ စဉ်းစားခဲ့ရတာပါပဲ…နောက်ဘယ်တော့မှ သူမမှားတော့ဘူး…နောက်ပြီး အခုဆိုရင် အင်မတန်စိတ်ချရတဲ့ ဟိုတယ်မန်နေဂျာဖြစ်နေပါပြီ…အခုဆို ဘယ်ခရီးကိုထွက်ထွက်…ဘယ်လောက်ကြာအောင်နေနေ…ဟိုတယ်မှာ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်း…စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း…ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှုအပိုင်းတွေမှာ နောက်ဆံတင်းစရာ မလိုလောက်အောင် စိတ်ချရတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ…သူမှားခဲ့တဲ့ အမှားကို ဟိုစဉ်တုန်းကသာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်တင်ပြောဆိုအရေးယူခဲ့မယ်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်သေချာပေါက် ဆုံးရှုံးရမှာ အသေအချာပါပဲ…ကာစတန်မာ အမြဲမှန်တယ်ဆိုပေမယ့် တခါတလေ ၀န်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဟာ ကာစတန်မာထက် အရေးကြီးချင် ကြီးနေတတ်ပါတယ်…ကောင်းတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ စုစည်းမိသွားပြီဆိုရင် ကာစတန်မာကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာ လှည့်ကြည့်စရာတောင် မလိုပါဘူး…တကယ်စိတ်ချရပြီးသားပါ….
ကဲ…နောက်ဆုံးပြောရရင်ကတော့ ကျွန်တော်လဲ အရင်တုန်းက မှားခဲ့ပါတယ်…အခုလဲ မှားနေဆဲပါပဲ…နောက်လဲ မှားနေဦးမှာပါပဲ…အဲ့သလိုပါပဲ လူတွေ လူတွေကလဲ မှားခဲ့…မှားဆဲ…မှားနေကြဦးမှာပါပဲ…ဒီလို အမှားတွေကိုတွေ့တိုင်း အမြဲတမ်း အပြစ်ပေးအရေးမယူကြပဲ မှားတဲ့အဓီက အခြေခံအချက်နဲ့ မှားသူရဲ့မှားစဉ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အဓိကထား စဉ်းစားရင်း မှားခဲ့သူကို ခွင့်လွှတ်သင့်ရင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေ…ပြင်ဆင်ချင်တဲ့သူကို ပြင်ဆင်ခွင့် ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ သဗ္ဘေသတ္တာ ကာမသကာ ပေါ့ဗျာ…ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…
သူကလုပ်တဲ့.. အကျိုး..အကြောင်းတရားတွေကြည့်ပြီး.. ကိုယ်ကအကျိူးအကြောင်းတရားတခုဖြစ်လာအောင် .. ချိန်ဆလုပ်ကြရမှာပါ…
ဘယ်လိုအမှားလည်း.. ဘာကြောင့်..ဘယ်စိတ်နဲ့…ဘယ်နေရာမှာ.. ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်သလည်း.. ကျူးလွန်သလည်းကြည့်ကြရမှာပေါ့…
လက်တွေ့ဘ၀ထဲက.. နှူကလီးရီးယားသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာက …မှားလို့မရပါဘူး..
အာကာသယဉ်..ဒုံးပျံလွှတ်စခန်းက အင်ဂျင်နီယာတွေ ..မှားလို့မရပါဘူး..
ဒီအတိုင်းပဲ.. လေယဉ်ပိုင်းလော့..၊ သင်္ဘောကပ္ပတိန်.. မှားလို့မရပါဘူး..
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်.. မှားလို့မရပါဘူး..။ သူမှားရင်လူတယောက်သေမှာပါ..
အင်ဂျင်နီယာမှားရင်တော့.. လူသိန်းသန်းချီလည်း သေနိုင် ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်.. :harr:
ဟာ.. မှားတယ်..ပြန်ဖျက်တယ်.. ပြန်ရိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဟော.. မပြည့်စုံသေးပါဘူး.. ပြင်တယ်ခင်ဗျာ.. ပြန်ဖျက်တယ်ခင်ဗျာ..
.. ဒီအကြောင်းတရားဟာ.. ဘယ်သူအလုပ်ကိုမှ. အကျိုးတစုံတရာဖြစ်ပါ..
အဲဒါကို.. လူမှုဆက်ဆံရေး.. လုပ်ငန်းခွင်.. မိဘသားသမီး.. လုပ်ခေါ်ကိုင်ဖက်.. အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား.. စသဖြင့်.. ကံ..ကံရဲ့အကျိုးကြည့်.. အတိုအရှည်နဲ့.. ဆုံးဖြတ်သွားကြဖို့ပါပဲ..
သဂျီးက ဒုံးပျံလွှတ်စခန်းပြောမှ သွားသတိရမိတာတခုရှိတယ်။ ကျမ အရင်က NASA မှာအရမ်းအလုပ်လုပ်ချင်တာ။ ဟိုတလောက Mars Rover Landing လုပ်တာကို တီဗွီမှာ Live ပြတော့ ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ပြီး ၊ အောင်အောင်မြင်မြင်ဆင်းနိုင်တော့မှ NASA အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချနိုင်တော့သကာလ NASA မှာလုပ်ချင်စိတ်လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။
ခဏခဏလွဲနေရင်တော့ ကောင်းပါတယ် စိတ်ပျက်ဖို့
ကိုယ့်အမှားက တခြားလူကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ထိခိုက်သွားလဲဆိုတာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လည်း အမှားတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မှားခဲ့တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ကွာခြားတတ်လို့…..
မှားခွင့်မရှိတာကို မှားလိုက်ရင် အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အကျိုးဆက်တွေ ရလာနိုင်တယ်။ :buu:
နောက်ဘယ်တော့မှဒီနေရာမှာ ဒီလို ပြန်မမှားဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲ ပြန်သတိပေးတယ်…နောက်အမှားအသစ်တစ်ခုသာ ကျုးလွန်မိရင် ကျုးလွန်မယ်…အရင်အမှားတော့ ထပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး
လူတွေဟာ အမှားအသစ်တွေချည်း ကျူးလွန်ပီး ငါမကြုံဖူးသေးလို့မှာတာပါလို့ဖြေသိမ့်
‘D စာကိုရေးရတာက ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အရင်ပို့စ်အောက်က အမှားဆို ဘာအမှားဖြစ်ဖြစ် လက်မခံဘူး…ကြီးသော ငယ်သော နားမလည်ဘူး…မှားလို့ကတော့ တွယ်မှာပဲ…ဆိုတဲ့ ကောမန့်ကို ဖတ်ပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါ…ညူကလီးယားဗုံးကြီးပဲထုတ်ထုတ်…လွန်းပျံယာဉ်ကြီးပဲ လွှတ်လွှတ်…တာဝေးပစ်ဒုံးပျံကြီးပဲ စမ်းစမ်း…နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်မှာ မှန်ဖို့ ရှေ့က ရီဆပ်ခ်ျ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အကြိမ်ကြိမ်အလီလီ မှားခဲ့ကြတာပါပဲ…ဒါတောင်မှ ချယ်လင်ဂျာလို အမှားသေးသေးလေးကနေ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်မှာ အကြီးမားဆုံး အမှားဖြစ်သွားသေးပါတယ်…ရီဆပ်ခ်ျလုပ်လိုက်..မှားလိုက်…ဒီပညာရှင်ကို အရေးယူလိုက်..ထုတ်ပစ်လိုက်…ဒီလိုသာ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ပညာရှင်မှ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး…ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ အချိန်တုန်းက အမှားကို ခွင့်လွှတ်မှသာ အမှန်ကို ဒက်ထိ သေချာရောက်မှာပါ..နောက်ဆုံးမှာကော မှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ တွယ်သာတွယ်ပေတော့…မှားတိုင်းမတွယ်သင့်ဘူး ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်စာရဲ့ ဆိုလိုရင်း ပါပဲ…လိုရင်းမရောက်ခဲ့ရင်တော့ ရေးသားသူရဲ့ အရေးအသားညံ့ဖျင်းမှု သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား…ပထမဆုံးကောမန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ…
ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခု မှာ လူ့စွမ်းရည် အရင်းအမြစ်တွေ ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးဘူး။
လူညံ့တွေ က ခေါင်းဆောင်နေရင်တော့ တော်တဲ့ သူတွေ ရှိနေတာကိုတောင် ဘယ်လိုသုံးရမယ် မသိတာ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ အရာရာကို Zero Tolerance လို့ သဘောထားပါတယ်။
မှားကို မမှားရဘူး။မှားရင် ငါညံ့တာပဲ။စာမေးပွဲ တစ်ခုဖြေရင် အမှတ်ပြည့်မရလို့ကတော့ ငါညံ့သေးတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
(ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ကြီးထင်ပါတယ်)ရဲ့ အဆုံးမခံပန်ကြားလွှာဆိုတဲ့ ကဗျာလေးထဲမှာ
ကိုယ့်အပြစ်မြူမှုန်ကို မြင်းမိုရ်ပုံရှုပါ လို့ ပါပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မမှားအောင်နေမယ် ဆိုတဲ့သူနဲ့ မှားရင်ခွင့်လွှတ်ကြမှာပါပဲ၊လူဆိုတာ အမှားမကင်းဘူးလို့ ပြောတဲ့သူ ဘယ်သူပိုပြီး အောင်မြင်မယ်ထင်ပါသလဲ။
အထည်ချုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာဆိုရင် ကြယ်သီးပေါက်တွေကြယ်သီးတွေ တပ်ချင်သလိုတပ်ထားတဲ့ ဈေးချုပ်အထည်၊
measurement တစ်ခုကို +/-.5 cm သာလွဲခွင့်ပေးတဲ့ export ထည်၊
ကိုယ်တိုင်း အတိုင်း လုံးဝလွဲခွင့်မရှိတဲ့ Armani တို့လို ဒီဇိုင်နာဖက်ရှင်ထည်
သူတပါးအပေါ် အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုဝေဠုလို လက်အောက်ငယ်သားကို ညှာတာတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ငယ်သားဟာ သူ့အပြစ် သူ့အမှားကို မှားမှန်း သိကိုသိရပါမယ်။
မှားသွားမိပါတယ်ဆိုတာ စိတ်ပါလက်ပါ သိမှ နောင်မမှားမှာပါ။
သူ့အပေါ် အပြစ်ပေးမှု အရေးယူမှုကတော့ အုပ်ချုပ်သူရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားပေါ်တည်ပါတယ်။
လူတွေက အမှားကို အရေးမယူရင် ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ်တတ်ပါတယ်။
ကောင်းတာသာ အတုမခိုးရင်နေမယ် မကောင်းတဲ့ အကျင့်ကတော့ အလိုလို ကူးစက်တတ်ပါတယ်။
….ကောင်းတာသာ အတုမခိုးရင်နေမယ် မကောင်းတဲ့ အကျင့်ကတော့ အလိုလို ကူးစက်တတ်ပါတယ်။….
မှန်ပါ့ဗျာ…ညှာတာ တာတော့ ညှာတာပါတယ်…လုံးဝညှာတာလို့မရတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပါပဲ…အမှားကို သိလို့ ပြောပြတာကို မရလို့ ထုတ်ကိုပစ်ရတဲ့ သူတွေအကြောင်းလဲ ထပ်ရေးပါဦးမယ်…ကောမန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ…
ကျွန်တော်က ဂဇက်ထဲ မရောက်တာ ကြာပါပြီ၊ လိုင်းမကောင်းတာနဲ့ ၊ဖုန်းလေးနဲ့ပဲ သုံးနေလို့ပါ။ အခု ဂျွန်လား ဘာလား အရင်က မရှိသေးဘူးထင်ပါ့၊ ပြောချင်တာက အဲ့နှစ်ကဆို အမ်အိုင်တီမှာ သယ်ရင်းတွေရှိဘူးတယ်၊ သိတယ့်သူများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ၊ အားပေးနေပါတယ်ဗျာ၊ ဘာမှမတတ်ဘူးလို့ တော့ ရေးမထားပါနဲ့ဗျာ၊ ကိုယ်တတ်တာ ကိုယ်တိုင်မသိ တာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲနော၊ တခြား ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရခဲ့ အုံးမယ်ယုံကြည် ပါတယ်ဗျာ၊ ကလေးတွေ အားလျော့ကုန်ပါ့မယ်၊
လူတိုင်း အမှားနဲ့ မကင်းနိုင်ကြပါဘူး ။
တစ်ခါလည်းမှားနိုင်သလို …. တစ်ခါ မှားဖူးပေမယ့် .. ထပ်လည်း မှားနိုင်ပါတယ် ။ အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာ ယူရမှာပါ ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ အခွင့်ရေးပေးရပါလိမ့်မယ် … ။ အလားတူ အမှားမျိုး အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မှားတယ်ဆိုလျှင်တော့ဖြင့် …. ကိုယ်တိုင် ဆိုလျှင်တော့ … အသုံးမကျတဲ့ လူအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်ပြီး ၊ သူများဆို ဥပက္ခာပြုသင့်တဲ့ လူအမျိုးစားလို့ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ် ။